Magetsi emagetsi - Ikkaro
kudzidziswa >> Motors >> Magetsi mota
Icho chigadzirwa chinotenderera chinoshandura magetsi emagetsi en michina simba.
Pano tichaona mashandiro avo uye maitiro ekuvaka iwo, kubva kuinjini dzakareruka kusvika kune dzakaomarara
Electrostatic Jenareta: Nhoroondo yeStatic Magetsi
Nhoroondo yesainzi uye tekinoroji inogara iri shanduko yezviwanikwa nekuvandudzwa. Muenzaniso mukuru weiyi magetsi emagetsi kana jenareta. Muchinyorwa chipfupi ichi tichaona nhoroondo yemagetsi zvichitevedzana zvakawanikwa zvine chekuita ne electrostatics uye yavo tekinoroji mashandisiro, kunyanya muchimiro chemajenareta, sezvo zvakaonekwa kuti kukwizwa kweamber kwakakwezva zvimwe zvinhu uye hazvina kunyatsozivikanwa kuti nei kunyange majenareta emazuva ano atova michina isingachashandi inoshandiswa pakudzidzisa nekutandara mitambo yefizikisi.
Jenareta remagetsi rinokwanisa kugadzira magetsi akakwira asi nemagetsi madiki.. Dzinobva pakukweshana, kubva musimba remagetsi iro isu tinofanirwa kubatsira kuti tiwane kukwesha muzvinhu zviviri, chikamu chimwe chinoshandurwa kuita kupisa uye chimwe kuita electrostatic simba.
ari Mota mazana manomwe nemakumi manomwe nenomwe mota dzakananga inoshandiswa muzvirongwa zvakawanda uye izvo zvandinofunga zvinozivikanwa zvishoma nevanhu.
Kana tichitaura nezvemhando idzi dzeinjini, iyo 775 inoreva saizi yemota iri yakajairwa. Nenzira iyi tinogona kuwana mazana manomwe nemakumi manomwe nenomwe akagadzirwa nemhando dzakasiyana, aine akasiyana ma voltages uye akasiyana simba, aine 775 seti yemabheyari kana maviri. Asi zvinoremekedzwa nemunhu wese kukura kweinjini.
Magetsi emagetsi anovandudza kutonga kwavo uye kuchengetedza
Rinenge gore rapfuura, isu takareva iyo Scheneider Electric Dhijitari Library. Mune ino kesi isu tinopfigira kuitira kuti iwe ... Ramba uchiverenga
Maitiro ekugadzira iyo Curie Mhedzisiro Magnetic mota
Kutenda kune yekuisa kubva Tao yefizikiki, Ndinoziva iyo Mannetic Curie Injini Injini.
Iyo mota yakavakirwa pane chivakwa che ferromagnetic zvinhu zvakawanikwa naPierre Curie, inova kuti mushure meimwe tembiricha izvo zvinhu zvinorasikirwa nemagineti uye havasisiri kukwezva kumagetsi.
Mendocino Solar Injini
El Mendocino Injini Ndicho motokari yemagetsi iyo magineti inobvisa uye inoshandisa simba rezuva. Kunaka kweinjini kuri kuiona ichimhanya ichiyangarara mumhepo. Inotaridzika chaizvo semashiripiti.
Yakagadzirwa nezvikamu zviviri zvakasiyana, iyo magnetic system inoita kuti iite levlect uye chikamu chemagetsi chemagetsi chinoita kuti ichinje.Mota yacho ine zviso zvina (chikamu chakatenderera) yakatenderedza axis, iyo inoita rotor. Iyo rotor block ine maviri seti emakoroni uye rezuva sero rakanamirwa kune rumwe rutivi. Iyo shaft yakatwasuka uye ine magineti kumagumo ese.
Ongororo mashandiro emagetsi emagetsi uye emagetsi
Mushure mechinyorwa chekupedzisira pamusoro pekuvakwa kwechimwe-chikamu chinotsiva mota yazvino, ndakazoona ichifadza kuturika ... Ramba uchiverenga
Gadzira AC mota
Ini ndawana webhusaiti kwavanoratidza maitiro ekuvaka yakapusa imwechete chikamu ac mota. Zvinotaridza zvakakosha kusimbisa kuti zvinongoshanda nechikamu chimwe chete.
Injini inogadzirwa nezvinhu zviri nyore kuwana nekuvandudza iyo motokari kutanga pa zvidzidzo zvezvigadzirwa zvemagetsi and of the magetsi emota.
Ndinoyeuka apo ndiri kukoreji ini ndakatanga dzidza michina yemagetsi, vakatanga kutidzidzisa a yakanaka chete mota yekuchinja. Uye kubva apa zvichienda mberi ivo vaiigadzira ichiwedzera uye nekuwedzera kusvikira vawana ese marudzi enjini, asi aigara achivakirwa pamisimboti imwechete.
Kuvakwa kweiri nyore homopolar mota
Pano tinoona maitiro ekuvaka yakapusa zero yekuteedzana mota, ine bhatiri chete, chidimbu chetambo uye magineti. The… Ramba uchiverenga